မိုးရေထဲက သူစိမ်း – For her myanmar
Posted on May 17, 2019 Author Christina Rosy	Comment(0)
မျက်နှာပေါ် စီးကျနေသော မျက်ရည်တွေကို သူ(မ) သုတ်ပစ်လိုက်သည်။ သူ(မ) မျက်ရည်တို့သည် တစ်ယောက်သောသူနှင့် မထိုက်တန်။ တဖွဲဖွဲ ရွာနေသော မိုးစက်တို့ကို မျက်နှာထက်သို့ ကျစေရင်း ခံစားချက်တွေကို ရှင်းထုတ်နေမိသည်။
သူ(မ)ထိုင်နေသည့်နေရာက ကားမှတ်တိုင် တစ်ခု… ည ၉ နာရီ ထိုးခါနီးမို့လည်း မှတ်တိုင်တွင် လူသိပ်မရှိတော့… ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကားပေါ်တက်သွားဖို့အတွက်ကလည်း သူ(မ)စိတ်တို့ လေးနေသည်လေ… လမ်းလျှောက်ဖို့ အားပင် မရှိတော့သလို… အတွေးထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ အချိန်အတော်ယူနေရင်း ဖုန်းသံကြားမှ အသိက သေချာဝင်လာသည်။
“ဟယ်လို..အမေ။ အင်း။ လာနေပြီ။ ကားမရသေးလို့။ ဟုတ်။ ဟုတ်။ ဒါပဲနော်”
စိတ်ပူနေသော မေမေ့မျက်နှာ မြင်ယောင်ရင်း ပြန်ဖို့ အားတင်းပြီး ပြန်ရန် ပြင်ဆင်လိုက်သော်ငြား နာရီဝက်လောက် ကြာသည်ထိ မည်သည့်ကားမှ ရောက်မလာခဲ့… Grab ငှားရန် ဖုန်းထုတ်လိုက်သည့်အချိန်တွင်မှ သူ(မ) သတိထားလိုက်မိသည်က သူ(မ)ဖုန်း ဘက်ထရီ ကုန်နေသည် ဆိုသည့်အကြောင်းပင်… လူသူ ကင်းမဲ့နေသော ပတ်ဝန်းကျင်၊ မှောင်မည်းနေသော မှတ်တိုင် နှင့် ကားသွားကားလာကြဲသည့် လမ်းမထက်၌ သူ(မ) တစ်ကိုယ်တည်း…
မိုးကလည်း တိတ်မည့်ပုံမပေါ်… သူ(မ) လုပ်နိုင်သည့် အရာက တစ်ခုသာ… ထိုအရာကတော့ လူစည်ကားသည့် နေရာထိ လမ်းလျှောက်သွားဖို့ပင်… ထီးဆောင်းထားသော်ငြား သည်းကြီးမည်းကြီး ရွာနေသည့် မိုးကြောင့် သူ(မ) တစ်ကိုယ်လုံး ရွှဲနစ်လျက် ခိုက်ခိုက်တုန်နေလေပြီ။
ထိုစဉ်မှာပင် အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့် ကားတစ်စီးက သူ(မ)ဘက် ဦးတည်လာသည်ကို တွေ့လိုက်ရခြင်းကြောင့် သူ(မ) မနည်းရှောင်လိုက်ရသေးသည်။ လမ်းဆက်လျှောက်လာရင်း ကားထွက်လာသည့် လမ်း၏ ထောင့်ချိုးတွင် လူတစ်ယောက် လဲကျနေသေည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ကြောက်ကြောက်နှင့် ကျော်သွားဖို့ လုပ်လိုက်သော်ငြား အဆင်ပြေနေပုံ မပေါ်သည့် ထိုသူကြောင့် အရဲစွန့်ပြီး အနားသို့ကပ်၍
“အင်း… ကျွန်တော် ခြေထောက်နည်းနည်းပွန်းသွားလို့၊ အဆင်ပြေပါတယ်ညီမ။ တစ်ခုပဲကူညီပေးနော်… ကျွန်တော့်ကိုထူပေးပါလား”
သူ(မ) လက်ကမ်းပေးလိုက်သည်။ သူ(မ)လက်ကို ကိုင်၍ ယိုင်တိုင်တိုင်နှင့် ကြိုးစားထရပ်ရှာသော ထိုသူသည် မျက်လုံးနက်နက်၊ မျက်ခုံးထူထူ၊ နှာတံစင်းစင်း၊ နှုတ်ခမ်းကွေးနှင့် ခန့်ထည်သော ကိုယ်နေဟန်ရှိသည်ကို သတိထားလိုက်မိသည်။ ယောက်ျားပီသကာ ချောမောလွန်းသော ထိုသူကို သူ(မ) မငေးဘဲ မနေနိုင်ချေ…
Related Article >>> သူစိမ်းရဲ့ မွေးနေ့ပါတီ
“အမလေး။ ကျေးဇူးပါ ညီမ။ ခုနက ဘယ်ကောင်မှန်းမသိ… ကားကို အရှိန်နဲ့မောင်းလာတော့ အစ်ကို မနည်းရှောင်လိုက်ရရင်း ဖြစ်သွားတာ။”
“ဒါနဲ့ ညီမ အကူအညီ တစ်ခုခုလိုလား”
“ညီမကို တက္ကစီလေး ကူငှားပေးပါလား၊ ဘတ်စ်ကားတွေ မလာတော့လို့”
“အိုခေ။ ရတယ်။ တစ်ဘလောက်လောက် ဆက်လျှောက်ရင် ငှားလို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးရောက်ပါပြီ။ အစ်ကိုလည်း အဲ့ဒီဘက်သွားနေတာ။ လိုက်ခဲ့လေ။”
သူစိမ်းတစ်ယောက်ကို မယုံရမှန်းသိသော်ငြား ထိုသူကိုတော့ သူ(မ) ယုံထားမိသည်။
“ညီမက ဒီနားမှာ အလုပ်လုပ်တာလား”
“ပါဆင်နယ်တွေ မေးမိရင် ဆောရီးနော်”
“အော်..ဟားဟား..ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီလောက်မိုးရေထဲမှာ သူလိုက်မပို့ဘူးလား”
သူ့ရဲ့အမေးမှာ ချက်ချင်း မျက်ရည်တို့ ဝဲတက်လာပေမဲ့ စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ထိန်း၍
“ဟင့်အင်း။ သူ့အတွက် တခြားအရေးကြီး ကိစ္စတွေရှိနေလို့တဲ့။ ညီမနဲ့တောင် ထွက်မတွေ့ဘူး”
သူ(မ) အပြုံးတုတစ်ခုဖန်တီး၍ ပြုံးပြလိုက်ပေမဲ့ တစ်ဖက်က ကိုခန့်ချောကြီးသည်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပုံပေါ်သည်။ နှစ်ဦးသား တိတ်ဆိတ်စွာ လမ်းလျှောက်လာကြရင်း မကြာခင်မှာပင် သူ့ထံမှ စကားသံ ထွက်လာခဲ့သည်။
“အစ်ကိုလည်း ခုနကမှ အသည်းခွဲခံခဲ့ရတာ။ ညီမထက်တော့ ပိုဆိုးမယ်ထင်တယ်။ သူ့ကိုစပရိုက်လုပ်ဖို့သွားရင်း တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့နမ်းနေတာကို အစ်ကို့မျက်လုံးနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့ရတာလေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း ကားမရှုပ်တဲ့လမ်းမှာ ကားပွတ်ခံရတာ။ ဟားဟားဟား”
သူရယ်နေပေမဲ့ ထိုအရယ်သည် “လုပ်ရယ်”ဖြစ်မှန်း သူ(မ) သိနေသည်။ နှစ်ယောက်လုံးတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်မိ၊ ပြုံးပြပြီး စကားမဆိုဖြစ်ဘဲ ဆက်လျှောက်နေမိကြသည်။ ကျိုးပဲ့နေတဲ့ နှလုံးသား တစ်စုံ တွေ့ဆုံခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော အနွေးဓာတ်ကို ခံစားရစေသည်မဟုတ်ပါလား…
Related Article >>> ချောက်ချားညရဲ့ ခြေသံများ ….
“ဟော..ရောက်ပြီ။ တွေ့လား။ ဒီနားမှာ ညမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ လူစည်နေတာ။ ဟိုလမ်းဆုံနားရောက်ရင် အစ်ကိုခင်တဲ့ တက္ကစီသမားတစ်ယောက်ရှိတယ်။”
နှစ်ယောက်သား လမ်းဆုံဘက်သို့ စကားတပြောပြောနှင့် လမ်းလျှောက်လာကြသည်။ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့ နှစ်ယောက်ကြား အေးစက်မနေဘူး မဟုတ်လား.. ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူတို့ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ထူးဆန်းသလိုလို ကြည့်သွားကြသည်။
လမ်းဆုံနားအရောက် အရပ်ပုပုအသားညိုညိုနဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်ကို သူက နှုတ်ဆက်ပြီး…
“အစ်ကိုရေ။ ဒီကညီမကို ….နေရာလေး လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါ။”
သို့သော် ထို ဦးလေးက သူ(မ)ဘက်ကို ပြူးပြဲကြည့်ရင်း…
“ဟေ့ကောင်လေး။ ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ ဘယ်က ညီမလဲ။ မင်းဘေးမှာ ဘယ်သူရှိလို့လဲ”
တက္ကစီသမားပြောစကားကြောင့် သူ သူ(မ)ဘက်ကို အံ့သြထိတ်လန့်ခြင်းများဖြင့် လှည့်ကြည့်လာသည်။ သူ(မ)သည်လည်း အံ့သြသွားရသည်။ အဘယ်ကြောင့် ထိုဦးလေးသည် သူ(မ)ကို မမြင်ရသနည်း… သူ(မ)ရပ်နေသည့်နေရာသည် မှောင်ရိပ်လည်း မကျနေ… ထိုစဉ် သူ့ထံမှ စကားသံ ထွက်လာသည်။
“အစ်ကိုရေ.. မနောက်ပါနဲ့ဗျာ.. ဒီမှာလေ.. ကျွန်တော့် ဘေးမှာ ရပ်နေတဲ့ ညီမလေး.. ကျွန်တော် လမ်းမှာ ကားပွတ်ခံရသလို ဖြစ်ရင်း သူကူညီပေးလို့ သူနဲ့တူတူလျှောက်လာတာ။”
“ဟာ…ဟေ့ကောင်။ အဲ့ဒီ့လမ်းချိုးအကျော် ကားမှတ်တိုင်ရှေ့မှာ ခုနလေးတင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကားတိုက်ခံရလို့ လူတွေအုတ်အုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်သွားတာ ဟေ့ကောင်ရေ… ကားကလည်း ကမူးရှူးထိုး မောင်းလာတာလား၊ ဘရိတ်ပေါက်တာလား မသိပါဘူးကွာ… မင်းကို ပွတ်မိမလို ဖြစ်တဲ့ကားကလည်း ဒီကားပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်.. ကလေးမတော့ ကံဆိုးတာပဲ.. ကားက သူ့ကိုတိုက်ပြီးတဲ့အပြင် ဓာတ်တိုင်နဲ့ပါ ဝင်ဆောင့်လိုက်တော့ ပွဲချင်းပြီးပဲ… သနားစရာပါကွာ”
တက္ကစီသမားရဲ့ စကားအဆုံးမှာတော့ သူ(မ) ကမ္ဘာသည် မှောင်အတိ…
ညတဈည၊ သူစိမျးတဈယောကျနဲ့ သူ(မ)
မကျြနှာပျေါ စီးကနြသေော မကျြရညျတှကေို သူ(မ) သုတျပဈလိုကျသညျ။ သူ(မ) မကျြရညျတို့သညျ တဈယောကျသောသူနှငျ့ မထိုကျတနျ။ တဖှဲဖှဲ ရှာနသေော မိုးစကျတို့ကို မကျြနှာထကျသို့ ကစြရေငျး ခံစားခကျြတှကေို ရှငျးထုတျနမေိသညျ။
သူ(မ)ထိုငျနသေညျ့နရောက ကားမှတျတိုငျ တဈခု… ည ၉ နာရီ ထိုးခါနီးမို့လညျး မှတျတိုငျတှငျ လူသိပျမရှိတော့… ဖွတျသှားဖွတျလာ ကားပျေါတကျသှားဖို့အတှကျကလညျး သူ(မ)စိတျတို့ လေးနသေညျလေ… လမျးလြှောကျဖို့ အားပငျ မရှိတော့သလို… အတှေးထဲက ရုနျးထှကျဖို့ အခြိနျအတျောယူနရေငျး ဖုနျးသံကွားမှ အသိက သခြောဝငျလာသညျ။
“ဟယျလို..အမေ။ အငျး။ လာနပွေီ။ ကားမရသေးလို့။ ဟုတျ။ ဟုတျ။ ဒါပဲနျော”
စိတျပူနသေော မမေမေ့ကျြနှာ မွငျယောငျရငျး ပွနျဖို့ အားတငျးပွီး ပွနျရနျ ပွငျဆငျလိုကျသျောငွား နာရီဝကျလောကျ ကွာသညျထိ မညျသညျ့ကားမှ ရောကျမလာခဲ့… Grab ငှားရနျ ဖုနျးထုတျလိုကျသညျ့အခြိနျတှငျမှ သူ(မ) သတိထားလိုကျမိသညျက သူ(မ)ဖုနျး ဘကျထရီ ကုနျနသေညျ ဆိုသညျ့အကွောငျးပငျ… လူသူ ကငျးမဲ့နသေော ပတျဝနျးကငျြ၊ မှောငျမညျးနသေော မှတျတိုငျ နှငျ့ ကားသှားကားလာကွဲသညျ့ လမျးမထကျ၌ သူ(မ) တဈကိုယျတညျး…
မိုးကလညျး တိတျမညျ့ပုံမပျေါ… သူ(မ) လုပျနိုငျသညျ့ အရာက တဈခုသာ… ထိုအရာကတော့ လူစညျကားသညျ့ နရောထိ လမျးလြှောကျသှားဖို့ပငျ… ထီးဆောငျးထားသျောငွား သညျးကွီးမညျးကွီး ရှာနသေညျ့ မိုးကွောငျ့ သူ(မ) တဈကိုယျလုံး ရှဲနဈလကျြ ခိုကျခိုကျတုနျနလေပွေီ။
ထိုစဉျမှာပငျ အရှိနျပွငျးပွငျးနှငျ့ ကားတဈစီးက သူ(မ)ဘကျ ဦးတညျလာသညျကို တှလေို့ကျရခွငျးကွောငျ့ သူ(မ) မနညျးရှောငျလိုကျရသေးသညျ။ လမျးဆကျလြှောကျလာရငျး ကားထှကျလာသညျ့ လမျး၏ ထောငျ့ခြိုးတှငျ လူတဈယောကျ လဲကနြသေညျေကို တှလေို့ကျရသညျ။ ကွောကျကွောကျနှငျ့ ကြျောသှားဖို့ လုပျလိုကျသျောငွား အဆငျပွနေပေုံ မပျေါသညျ့ ထိုသူကွောငျ့ အရဲစှနျ့ပွီး အနားသို့ကပျ၍
“အငျး… ကြှနျတျော ခွထေောကျနညျးနညျးပှနျးသှားလို့၊ အဆငျပွပေါတယျညီမ။ တဈခုပဲကူညီပေးနျော… ကြှနျတေျာ့ကိုထူပေးပါလား”
သူ(မ) လကျကမျးပေးလိုကျသညျ။ သူ(မ)လကျကို ကိုငျ၍ ယိုငျတိုငျတိုငျနှငျ့ ကွိုးစားထရပျရှာသော ထိုသူသညျ မကျြလုံးနကျနကျ၊ မကျြခုံးထူထူ၊ နှာတံစငျးစငျး၊ နှုတျခမျးကှေးနှငျ့ ခနျ့ထညျသော ကိုယျနဟေနျရှိသညျကို သတိထားလိုကျမိသညျ။ ယောကျြားပီသကာ ခြောမောလှနျးသော ထိုသူကို သူ(မ) မငေးဘဲ မနနေိုငျခြေ…
Related Article >>> သူစိမျးရဲ့ မှေးနပေ့ါတီ
“အမလေး။ ကြေးဇူးပါ ညီမ။ ခုနက ဘယျကောငျမှနျးမသိ… ကားကို အရှိနျနဲ့မောငျးလာတော့ အဈကို မနညျးရှောငျလိုကျရရငျး ဖွဈသှားတာ။”
“ဒါနဲ့ ညီမ အကူအညီ တဈခုခုလိုလား”
“ညီမကို တက်ကစီလေး ကူငှားပေးပါလား၊ ဘတျဈကားတှေ မလာတော့လို့”
“အိုခေ။ ရတယျ။ တဈဘလောကျလောကျ ဆကျလြှောကျရငျ ငှားလို့အဆငျပွတေဲ့နရောမြိုးရောကျပါပွီ။ အဈကိုလညျး အဲ့ဒီဘကျသှားနတော။ လိုကျခဲ့လေ။”
သူစိမျးတဈယောကျကို မယုံရမှနျးသိသျောငွား ထိုသူကိုတော့ သူ(မ) ယုံထားမိသညျ။
“ညီမက ဒီနားမှာ အလုပျလုပျတာလား”
“ပါဆငျနယျတှေ မေးမိရငျ ဆောရီးနျော”
“အျော..ဟားဟား..ဟုတျပါပွီ။ ဒီလောကျမိုးရထေဲမှာ သူလိုကျမပို့ဘူးလား”
သူ့ရဲ့အမေးမှာ ခကျြခငျြး မကျြရညျတို့ ဝဲတကျလာပမေဲ့ စိတျကို အတတျနိုငျဆုံးပွနျထိနျး၍
“ဟငျ့အငျး။ သူ့အတှကျ တခွားအရေးကွီး ကိစ်စတှရှေိနလေို့တဲ့။ ညီမနဲ့တောငျ ထှကျမတှဘေူ့း”
သူ(မ) အပွုံးတုတဈခုဖနျတီး၍ ပွုံးပွလိုကျပမေဲ့ တဈဖကျက ကိုခနျ့ခြောကွီးသညျလညျး စိတျမကောငျးဖွဈသှားပုံပျေါသညျ။ နှဈဦးသား တိတျဆိတျစှာ လမျးလြှောကျလာကွရငျး မကွာခငျမှာပငျ သူ့ထံမှ စကားသံ ထှကျလာခဲ့သညျ။
“အဈကိုလညျး ခုနကမှ အသညျးခှဲခံခဲ့ရတာ။ ညီမထကျတော့ ပိုဆိုးမယျထငျတယျ။ သူ့ကိုစပရိုကျလုပျဖို့သှားရငျး တဈခွားတဈယောကျနဲ့နမျးနတောကို အဈကို့မကျြလုံးနဲ့ တပျအပျမွငျခဲ့ရတာလေ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့လညျး ကားမရှုပျတဲ့လမျးမှာ ကားပှတျခံရတာ။ ဟားဟားဟား”
သူရယျနပေမေဲ့ ထိုအရယျသညျ “လုပျရယျ”ဖွဈမှနျး သူ(မ) သိနသေညျ။ နှဈယောကျလုံးတဈယောကျကို တဈယောကျမကျြလုံးခငျြးဆိုငျကွညျ့မိ၊ ပွုံးပွပွီး စကားမဆိုဖွဈဘဲ ဆကျလြှောကျနမေိကွသညျ။ ကြိုးပဲ့နတေဲ့ နှလုံးသား တဈစုံ တှဆေုံ့ခွငျးသညျ ပွီးပွညျ့စုံသော အနှေးဓာတျကို ခံစားရစသေညျမဟုတျပါလား…
Related Article >>> ခြောကျခြားညရဲ့ ခွသေံမြား ….
“ဟော..ရောကျပွီ။ တှလေ့ား။ ဒီနားမှာ ညမဟုတျတဲ့အတိုငျးပဲ လူစညျနတော။ ဟိုလမျးဆုံနားရောကျရငျ အဈကိုခငျတဲ့ တက်ကစီသမားတဈယောကျရှိတယျ။”
နှဈယောကျသား လမျးဆုံဘကျသို့ စကားတပွောပွောနှငျ့ လမျးလြှောကျလာကွသညျ။ အနညျးဆုံးတော့ သူတို့ နှဈယောကျကွား အေးစကျမနဘေူး မဟုတျလား.. ပတျဝနျးကငျြမှ လူတို့ကတော့ သူတို့နှဈယောကျကို ထူးဆနျးသလိုလို ကွညျ့သှားကွသညျ။
လမျးဆုံနားအရောကျ အရပျပုပုအသားညိုညိုနဲ့ ဦးလေးတဈယောကျကို သူက နှုတျဆကျပွီး…
“အဈကိုရေ။ ဒီကညီမကို ….နရောလေး လိုကျပို့ပေးလိုကျပါ။”
သို့သျော ထို ဦးလေးက သူ(မ)ဘကျကို ပွူးပွဲကွညျ့ရငျး…
“ဟကေ့ောငျလေး။ ဘာတှပွေောနတောလဲ။ ဘယျက ညီမလဲ။ မငျးဘေးမှာ ဘယျသူရှိလို့လဲ”
တက်ကစီသမားပွောစကားကွောငျ့ သူ သူ(မ)ဘကျကို အံ့သွထိတျလနျ့ခွငျးမြားဖွငျ့ လှညျ့ကွညျ့လာသညျ။ သူ(မ)သညျလညျး အံ့သွသှားရသညျ။ အဘယျကွောငျ့ ထိုဦးလေးသညျ သူ(မ)ကို မမွငျရသနညျး… သူ(မ)ရပျနသေညျ့နရောသညျ မှောငျရိပျလညျး မကနြေ… ထိုစဉျ သူ့ထံမှ စကားသံ ထှကျလာသညျ။
“အဈကိုရေ.. မနောကျပါနဲ့ဗြာ.. ဒီမှာလေ.. ကြှနျတေျာ့ ဘေးမှာ ရပျနတေဲ့ ညီမလေး.. ကြှနျတျော လမျးမှာ ကားပှတျခံရသလို ဖွဈရငျး သူကူညီပေးလို့ သူနဲ့တူတူလြှောကျလာတာ။”
“ဟာ…ဟကေ့ောငျ။ အဲ့ဒီ့လမျးခြိုးအကြျော ကားမှတျတိုငျရှမှေ့ာ ခုနလေးတငျ မိနျးကလေးတဈယောကျကားတိုကျခံရလို့ လူတှအေုတျအုတျကကျြကကျြဖွဈသှားတာ ဟကေ့ောငျရေ… ကားကလညျး ကမူးရှူးထိုး မောငျးလာတာလား၊ ဘရိတျပေါကျတာလား မသိပါဘူးကှာ… မငျးကို ပှတျမိမလို ဖွဈတဲ့ကားကလညျး ဒီကားပဲ ဖွဈမယျထငျတယျ.. ကလေးမတော့ ကံဆိုးတာပဲ.. ကားက သူ့ကိုတိုကျပွီးတဲ့အပွငျ ဓာတျတိုငျနဲ့ပါ ဝငျဆောငျ့လိုကျတော့ ပှဲခငျြးပွီးပဲ… သနားစရာပါကှာ”
တက်ကစီသမားရဲ့ စကားအဆုံးမှာတော့ သူ(မ) ကမ်ဘာသညျ မှောငျအတိ…
Tagged accident, Car, dead, Fun, Horror, Stranger, unknown
Posted on May 27, 2017 May 27, 2017 Author Christina Rosy
“အပူဆိုတာမကောင်းဘူး၊ ပူတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူး၊ ရာသီဥတုပူတယ်၊ ကော်ဖီပူတယ်၊ မီးပူတယ်။ ပူတာတွေအားလုံးက နာကျင်စေတယ်။”
ဓာတ်ပုံစားစေမယ့် ဝတ်စုံ (၆)မျိုး
Posted on May 13, 2017 November 7, 2018 Author Megan
ဒီဝတ်စုံတွေနဲ့သာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်။ အရမ်းလှစေရမယ်။
Posted on August 25, 2017 Author Christina Rosy
အိုး..လေတဟူးဟူးနဲ့ လရောင်လေးလည်း လင်းလက်နေလို့။ နာရီစက္ကန့်တံ တစ်ရွေ့ရွေ့အသံကြားနေရပေမယ့် မောင့်အသံကိုတော့ မကြားရသေး။